Korantada Sare ee Badweynta Jumladda, Dab-demiska iyo Soo-saareha iyo Alaabta Bixiyaha Saliidda Ka Hortagga |JL
Korantada Sare ee Badda, Ololka Dib u Celinta iyo Tuubada Gaadhista Saliidda Ka-hortagga
Alaabta ayaa 40% ka fudud tuubada caagga ah ee isla qeexida iyo 30% ka fudud tuubada birta ah.Waxay aad u yaraynaysaa xoogga shaqada ee shaqaalaha, waxay fududaysaa shaqada waxayna wanaajisaa hufnaanta shaqada.
Alaabta ayaa wali si caadi ah ugu shaqayn karta meel yar oo leexasho ah.Qaybteeda foorarsan, dhuumuhu had iyo jeer waa wareegsan yihiin, mana jiri doonto laabid, gidaar gudaha ah oo ka dhacaya iyo tuubada jirka oo jaban.
Tuubada Marinka ee Polyurethane waxay leedahay Astaamaha ugu muhiimsan ee soo socda
1. Miisaan fudud.
2. Dabacsanaan wanaagsan, foorarsi bilaash ah, oo aan xaddidnayn booska shaqada.
3. Iska caabinta wanaagsan ee cadaadiska togan iyo kuwa xun.
Cadaadiska shaqada wuxuu gaari karaa 4.2mpa, cadaadiska taban wuxuu gaari karaa 0.1MPa.
4. Iska caabbinta heerkulka wanaagsan.
Heerkulka adeeggu waa -40℃ku +70 ℃, iyotuubada jidhku ma adkaan doono ama ma jilicsanaan doono sababtoo ah isbeddelka cimilada ama heerkulka adeegga.
5.Waxay leedahay iska caabin wanaagsan oo saliid ah iyo iska caabbinta daxalka kiimikada.
Waxaa si weyn loo isticmaalaa in lagu qaado saliid ceyriin, saliidda shidaalka, saliidda cuntada, dareeraha kiimikada iyo gaaska dareere ah.
6. Waxay leedahay shaqo dhoofinta elektrostatic wanaagsan.
Marka la qaadayo saliida iyo warbaahinta gubanaysa, koronto joogto ah oo gaar ah ayaa la dhalin doonaa cadaadis, heerka socodka, is jiid jiid iyo arrimo kale awgeed.Haddii aan la dhoofin waqtigii loogu talagalay, cawaaqibka ka dhalan kara waa mid aan la qiyaasi karin.Alaabta waxaa taageeray oo lagu xiray gudaha iyo dibadda hubka gudaha iyo dibadda fiilooyinka birta double-lakabka, leh conductivity aad u fiican iyo ammaan iyo isticmaalka la isku halayn karo.
7. madaxa wax ka-qabashada hydraulic, xirid wanaagsan.
Qaybta isku xirka ee jirka biibiile iyo flange alaabtan, shirkadeena waxay bedeshay habka caadiga ah ee buuxinta resin epoxy, oo waxay qabataa qalab weyn oo biyo ah si ay u sameeyaan madaxa hoos u dhaca hal mar.Marka la barbardhigo alaabada la midka ah, waxqabadka shaabadeynta ayaa wanaagsan, muuqaalku waa qurux badan yahay, isku-dhafka ma dhici doono sababtoo ah korodhka degdega ah ee cadaadiska.
8. Iska caabbinta daxalka adag ee biyaha badda.
Deegaannada kala duwan ee la isticmaalo awgeed, way ku adagtahay in alaabta guud ee birta ahi ay u adkaysato daxalka biyaha badda iyo hawada ee deegaanka hawlgallada xeebaha ama xeebaha.Sida ku cad dabeecadda deegaanka, shirkadeena waxay soo saartay nooc cusub oo ah tuubada u adkaysata daxalka, kaas oo leh in ka badan 10 jeer caabbinta daxalka tuubada caadiga ah (waxaa lagu caddeeyey tijaabooyinka in lagu isticmaalay badda muddo 3 sano ah iyada oo aan daxalka lahayn. ).Qiimaha aad ayuu uga hooseeyaa kan tuubada birta ah, kaas oo ah mid dhaqaale iyo wax ku ool ah.
Tilmaamaha waxqabadka ee tuubada TPU polyester
Nooca polyester-ka Tuubada TPU: waxay leedahay heerkulka sare ee farsamada, caabbinta xirashada wanaagsan, caabbinta saliidda, shidaalka iyo caabbinta dareeraha, waxqabadka heerkulka sare, caabbinta UV iyo xasilloonida hydrolysis.Tuubada taxanaha TPU ee Polyester ayaa lagula talinayaa codsiyada leh shuruudaha kor ku xusan;
Codsiyada leh dabacsanaan heerkul hooseeya, iska caabin cimilo wanaagsan, iska caabbinta hydrolysis iyo shuruudaha taranta bakteeriyada ka hortagga, tuubada taxanaha TPU ee polyether ayaa lagula talinayaa;
Nooca PolycaprolactoneTuubada TPU: ma aha oo kaliya inay leedahay xoogga farsamada iyo heerkulka sare ee nooca polyester-ka TPU, laakiin sidoo kale waxay leedahay caabbinta hydrolysis iyo iska caabbinta heerkulka hooseeya ee nooca polyether-ka TPU, waxayna leedahay adkeysi wanaagsan, sidaas darteed waxay ku habboon tahay codsiga warshadaha gaarka ah.
Hore: Shiinaha ODM Hal Mar Samaynta Polyurethane laba-geesood ah - - alaab-qeybiyeyaasha Dhoofinta - Polyurethane Cadaadiska Sare ee Biyo-baxa Isticmaalka Macdanta - JL
Xiga: Sifooyin kala duwan iyo Xidhiidhiyaha Tuubbada Dabka ee la beddeli karo